Brooch Qof kastaa waa mid gaar ah oo asal ah. Tani waxay ku caddahay xitaa qaababka farahayaga. Khadadka xariiqda iyo calaamadaha gacmaheena sidoo kale waa kuwo asal ah. Intaa waxa u dheer, qof kastaa wuxuu leeyahay dhagxaan kala duwan, kuwaas oo ugu dhaw iyaga xagga tayada ama ku xidhan dhacdooyinka shaqsiyeed. Dhamaan astaamahan waxay siinayaan goobjooge fikir aad u badan oo wax ku bari kara oo soo jiidasho leh, oo u oggolaanaya inuu abuuro dahabka shaqsiyadeed oo ku saleysan khadadkaan iyo calaamadaha waxyaabaha shaqsiyadeed. Qurxinta noocan oo kale ah iyo qurxinta - waxay sameysaa nambarkaaga farshaxanimada shaqsiyeed
Dhar Taabasho Warshadda dharka casriga ah ee loo yaqaan 'jacquard textile' ayaa loo maleynayaa inuu turjubaan u yahay dadka indhaha la '. Dharkaan waxaa aqrin kara dadka aragga wanaagsan leh waxaana loogu talagalay iyaga inay caawiyaan dadka indhaha la 'ee bilaabaya inay lumiyaan aragga ama kuwa qaba dhibaatooyinka aragga; si loo barto habka loo yaqaan 'braille system' oo ah maaddo saaxiibtinimo leh oo la wadaago: dhar. Waxay ka kooban tahay alifbeetada, nambarada iyo calaamadaha xarfaha Midabyo laguma dari karo. Waa soosaar cabbir ahaan cawlan oo mabda 'ahaan u ah aragtida iftiinka. Waa mashruuc leh macno bulsheed isla markaana dhaafsiisan dharka ganacsiga.
Muraayadaha Indhaha Ururinta MYKITA MYLON waxay ka kooban tahay walax khafiif ah oo polyamide ah oo muujineysa isku hagaajin shaqsiyadeed oo heer sare ah. Maaddadan qaaska ah waxaa loo sameeyay lakab lakab iyadoo ay ugu wacan tahay farsamada Selective Laser Sintering (SLS). Dib-u-tarjumida wareegii caadiga ahaa iyo qaabkii oval-wareega panto ee muuqaalka ahaa ee moodada u ahaa sannadihii 1930-naadkii, moodalka BASKY wuxuu ku darayaa waji cusub ururinta muuqaalkan oo markii hore loogu talagalay in lagu isticmaalo isboorti.
Brooch Dahabka Dahabka Dahabku Dhar Taabasho Muraayadaha Indhaha